habakabaka, raha ny fanadihadiana nataon’ny avy eo anivon’ny IATA na ny fikambanana iraisampirenena misahana ity tontolo iray ity. Mipetraka ny fanontaniana, noho izany, ny amin’ny mety ho fahafaha-miavo-tenan’izy ireny afaka 3 na 6 volana. Nanomboka ny 9 aprily teo izay fanadihadiana izay ary raha ny tondro omen’izy ireo aloha dia tsy manome fanantenana mihitsy na ho an’ny resaka fohy ezaka izany na lavitra ezaka. Maro ireo efa mandindona ny hijanona tanteraka, raha ny voalaza, ary ho an’ny 90%n’ireo fiaramanidin’ny Air France KLM, ohatra, dia tsy miasa intsony. Toy izany koa ny an’ny, Lufthansa Alemana. Nilaza moa ny filoha tale jeneralin’ny Lufthansa, Carstein Sport, fa very 1 tapitrisa Euro isan’ora ny orinasany amin’izao fotoana izao. Raha ny tombana nataon’ireo tekinisianina dia afaka 3 taona fara-fahakeliny vao mety ho tafarina ny fahavoazan’ireo kaompaniam-pitanterana ana habakabaka vokatry ny fipariahan’izao COVID 19 izao.